फेरि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुदै, यि हुन् मन्त्रि हुने नयाँ अनुहार ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
फेरि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुदै, यि हुन् मन्त्रि हुने नयाँ अनुहार !
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका थप २ जना मन्त्री बन्ने भएका छन्। यो प्रदेश २ को खबर हो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुने भएपछि दुई मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छ।
पार्टीका संसदीय दलका नेता शत्रुद्यन महतो र सांसद प्रमोद यादवलाई सरकारमा सहभागी गराइने पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज धर्मनाथ साहले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन केही दिनअघि आफ्नै पार्टीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीलाई यो मन्त्रालायसहित कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय दिने तयारी छ। तत्कालिन राजपाबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई हटाएपछि जसपाले प्रदेशका ६ मन्त्रालय टुक्रयाएर १० मन्त्रालय बनाएको थियो।
जसमध्ये कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय र बाणिज्य आपूर्ती तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै जिम्मामा राखेका थिए।
यो मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिने भनिएपनि नेकपा एसका नेताहरुले लिन मानेका थिएनन् । यी दुवै मन्त्रालयमा बजेट नरहेकाले अर्को मन्त्रालय दिन यो पार्टीले भन्दै आएको थियो।
एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि जसपाले आफ्नै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो।पछिल्लो पटक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानून न्याय तथा प्रदेश सभा,
मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको छ। पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज साहका अनुसार दुवै मन्त्रीको शपथ ग्रहण आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि राखिएको छ।
तेस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरुसँग गरेको भद्र सहमति तोडेका छन्। एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा ओलीले भद्र सहमति तोडेका हुन्।
पूर्वमाओवादी समूहका एक एमाले नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भएको सहमतिअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पूर्वमाओवादी समूहबाट पर्नुपर्ने शर्त थियो।
त्यसैगरी, जनवर्गीय संगठन र दलित नेता भएको स्थानबाट एक÷एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि पूर्वमाओवादीबाट ल्याउने भनिएको थियो। तर, ओलीसँग भएको उक्त सहमतिविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा ओली पक्षले एकलौटी गरेको पूर्वमाओवादी समूहको गुनासो छ।
पूर्वमाओवादी नेताहरुका अनुसार शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङबाट मात्रै पूर्वमाओवादीबाट २३ जना आउनुपर्नेमा १ जनामात्रै प्रतिनिधि छानिएका छन्।असन्तुष्ट समूहका ती नेताले भने,
दाङमा हाम्रो राम्रो छ। तर, त्यहाँ ध्रुव आचार्यजस्ता सिनियरलाई ल्याएनन्, राप्रपाबाट अहिले भर्खर आएकालाई प्रतिनिधि बनाइयो । उहाँहरुका लागि हामी भन्दा राप्रपा प्यारो देखियो। ती नेताले असन्तुष्टि पोख्दै भने,
झापामा हाम्रै कारण एमालेमा पाँच हजार भोट बढेको छ, तर एकजना पनि प्रतिनिधि दिएनन्। यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ। रामबहादुर थापा बादल इञ्चार्ज रहेको बागमतीबाटै काठमाडौं र काभ्रेबाट एकैजना पनि पूर्वमाओवादीका नेता महाधिवेशन प्रतिनिधिमा परेनन्।
असन्तुष्ट ती नेताले सँग भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको सबै सूची आइसकेको त छैन, देशभरबाट १५० जना जति आउँछन् भन्ने हाम्रो आँकलन थियो, अहिलेसम्म १ सय जति आएका छन् । मधेसबाटै हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि आएनन्।
ती नेताका अनुसार सिन्धुलीबाट तीनजना र सुर्खेतबाट चार तथा बादलको गृहजिल्ला चितवनबाट २ जना मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका छन्। मधेसबाट ३०–४० जना आउने अनुमान गरिएकोमा त्यहाँ ओली समूहले एकलौटी गरेका कारण अति कम प्रतिनिधि छानिएका छन्।
लेखराज भट्ट इञ्चार्ज रहेको सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुमा पनि ओली पक्षले झेली गरेको पूर्वमाओवादी नेताको गुनासो छ। ती असन्तुष्ट नेताले भने, ‘केपी ओली निकट कर्णबहादुर थापाले सुदुरपश्चिममा अब लेखराज भट्ट पनि होइन, भीम रावल पनि होइन, अबको नेता म हुँ भनेर एकलौटी गरे।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विभेद भएको बताउँदै पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्, ‘विद्यार्थी संगठनबाट ५ जना प्रतिनिधि छानिँदा एकता प्रक्रियाबाट आएका एकजना पनि राखेनन्। ओलीबाले भनेको लागु भएन। यो हिसावले अब केन्द्रमा चुनाव लडियो भने हाम्रो पक्षको कोही आउँदैन भन्ने निष्कर्ष।
यसैबीच, पूर्वमाओवादीले आगामी महाधिवेशनलाई एकता र सहमतिको महाधिवेशन बताउनुपर्ने बताएको छ। एकताका क्रममा हाल एमालेमा पूर्वमाओवादी समूहका २५ जनाको उपस्थिति छ । आगामी महाधिवेशनमा कम्तीमा २५ सै जनाले वैधानिकता पाउनुपर्ने सो समूहको माग छ।
अनौपचारिक कुराकानीमा सो समूहका एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा हामी २५ जना छौं, बादलजीसहित चारजना स्थायी कमिटीमा छौं, यो टोलीलाई महाधिवेशनमा ग्यारेन्टी भएन भने हामी चुनावमै जाने कि नजाने भन्ने निश्चित छैन।
तलैसम्म पार्टी एकताको भाव झल्काउनका लागि पूर्वमाओवादी समूहबाट रामबहादुर थापा बादललाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताउँदै ती नेताले भने,
अहिले स्थायी कमिटीमा रहेका चारजना र प्रभु साहसमेत स्थायी कमिटीमा पर्नैपर्यो। बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा पनि हाम्रो दाबी छ। २१ केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशनले नेतृत्वमा समेट्न जरुरी छ।
पूर्वमाओवादी पक्षले अब महाधिवेशनमा सहमतिबाटै आफूहरुको व्यवस्थापन गर्न ओली तयार भए उनैलाई साथ दिने रणनीति बनाएको छ। तर, सहमति नगरे फरक ढंगबाट सोच्ने नेताहरुको भनाइ छ।
‘एमालेका तीन–चारवटा गुटमा हामी पर्न चाहँदैनौँ’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रा २५ जना मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा मिलाउन नसके अधिकांश फर्कन्छन्। विप्लव, प्रचण्ड, बाबुराम र नेकपा एस पनि छ, सही ढंगले मिलाएनन् भने एमालेबाट आधा मान्छे फर्किन्छन्। ठूला नेता नफर्के पनि तलका धेरैले एमाले छाड्छन्।
अहिले बादल, भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरुले समेत मानेको हुनाले त्यही सेन्टिमेन्टका आधारमा ओलीको पक्षमा लहर चलेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘तर, यसैगरी पेल्दै र एकलौटी गर्दै जाने हो भने,
यिनको लहर बन्द गर्न हामी एक–दुईजना काफी छौं। हामीले प्रचण्ड र ओलीमा केही फरक रहेनछ भन्दिने हो भने यिनको लहर स्वाट्टै घट्छ । हामीलाई त सडकमा हिँड्न केही आपत्ति छैन।